tattoos nechinoreva - Tattoos Art Ideas
Japanese tattoos dzinokurumbira dzine zvakawanda zvinoreva uye chinangwa. IJapan tattoo inouya nenzira dzakasiyana uye hukuru. Zvinhu zvinomiririra tattoo ndezvekutaura nyaya dzinofananidzwa sehove yeKoi nedhiragoni. Dhiragoni inobatanidzwa nehupfumi, furosi uye simba. Apo iwe uchiona matanho anofara uye anofadza zvikuru kunyanya kushamisa, unomanikidzwa kubvunza zvinorehwa neshoko. Iko kune maitiro mashomanana chete anoita kuti iwe ude kumira uye unoda zvaanoreva. Chimwe chezvifananidzi zvakadai idhiragoni tattoo inouya mukusiyana uye mitambo. Nzira iyo iyo tattoo yakaswededzwa nenzira yakanakisisa ichakusiya iwe uchikoshesa nezvokwadi iyo inoshamisa uye yakanaka.
Koi hove inogona kuva yakasiyana-siyana mumasikisi uye ruvara uye zvinoreva. Vamwe vanhu vakaipfeka vanoti zvinokonzerwa nekutarisana kwavari kusangana nazvo ivo vari kushandisa iko, asi vamwe vanoishandisa kuti vavatsigire kuti zvinhu zvose zvichave zvakanaka. Inogona kureva ushamwari, rudo ruchiva, rusununguko, simba, nhanho, upenyu hurefu, kubudirira, masculinity uye kufambira mberi. Kune mamwe mazita emutauro weJapane ane zvinoreva zvakadzama uye zvisingagumi iwe unogona kuchinja.
Dzvanya pano kuti uone shanduro yeJapanese tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Miseve inowanzoshandiswa nevasikana kuti vataure pamusoro pezvinhu zvakadzama uye zvisinganzwisisiki. Inogona kuvezwa muvaraidzo yakasiyana, kushuva kana muenzaniso. Mitsvuku yakatsva inogona kushandiswa kutaura pamusoro pekutsvoda uye kurara kwepabonde kana inyinwa munzvimbo dzakashamwaridzana semimba, mahudyu, mutsipa, etc. Izvi zvinogona kuvezwa muzvikamu zvakawanda zvemuviri zvichabva kutsvoda kutsva. Miromo mutsvuku inouya nerurimi inogona kushandiswa kuyanana nemashiripiti. Mitsvuku yakatsva inogona kushandiswa kutaura pamusoro pezvinhu zvinotyisa uye zvepanyama. Uyewo taura nezvemashoko ane zvinyorwa zvaunogona kushamwaridzana nazvo.
Kana muromo ukazaruka, unogona kushandiswa kutaura pamusoro pekurwisa. Miromo inoshandiswa kureva ukama. Miromo inogona kushandiswa kuratidzira vanhu muchiratidzo chedanana. Kana iwe wakagadzirira kuratidzira rudo rwako kana kuti kurukurira icho chinotevera, miromo inogona kushandiswa kutaurira nyaya yako.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa anobva mumuromo maitiro ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Semicolon tattoo zvinoreva
Semicolon tattoo inogona kuva duku asi zvinoreva chinhu chikuru. Chiratidzo chinokwezva zvakawanda uye zvinoshandiswa zvinomiririra kusagadzikana, kuora mwoyo, kuzvidzora, kuzviuraya uyewo chido chekuenderera mberi nehupenyu. Iyo semicolon inotaura nezvezvinoreva hupenyu, kuvimbisa vanhu kuti kuguma kusati kwasvika. Nhasi, semicolon yave iyo chiratidzo chekunyora kuti avo vari kutambura kurarama vanogona kuzviyeuchidza ivo kuti vane chimwe chinhu chavanofanira kuraramira. Kune hutano hwakasiyana hwechi tattoo uye iwe ndiwe unofunga kuti unoda sei semicolon yako kuti ioneke. Pakupera kwezuva, semicolon inomiririra chimwe chinhu chakakura uye chinonyanya kukosha chaunogona kunzwisisa.
Vaya vakasarudzwa vanogona kunyora tattoo iyi kuti vaudze zvavari kukwira. Iko tattoo ndeyekare uye inogona kukurudzira vanhu kuti vatevere kurota kwenyu. Iwe unogona chaizvo kuwana kukurudzirwa kwaunoda iwe paunenge uine aya mavara pamuviri wako. Zvinotora pamusoro pehuchangamire hwemunhu ari kunyengedza. Zvinotora pamusoro pekuzvidzora uye zvinotaurawo pamusoro pokusununguka kweiye munhu ane tattoo.
Dzvanya pano kuti uone svondo rekupedzisira semicolon tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Zvidhori zviduku zvine zvinoreva
Zvidhori zviduku zvine chinangwa zvingakubatsira iwe kumiririra zvinhu zvakawanda zvirikuitika kwauri. . Vanhu vazhinji vanoita iyo iyo inofunga kuti ine simba pamusoro pesimba rekudenga uyewo zvekudenga, inomirira nhoroondo nesayenzi. Vanhu vanoshandisa chirevo ichi vangave vasingafariri zvinorehwa pamusoro apa nokuti mwedzi wematoto une zvinyorwa zvizhinji. Bhatius yebhuruu inomiririra kutonga kwemweya pane zvepanyama. Inomiririra uchenjeri, njere uye ruzivo. Ikoji yepepuru inomiririra maonero ezvakaitwa nechitendero. Octopus tattoo zvakare zvinoreva kuti mune tariro mune ramangwana. Kukwanisa kweropa kukuita zvinhu zvakawanda nemakumbo ayo akawanda ndiko kunoita kuti vanhu vatende kuti chisikwa chacho chakawanda. Feather tattoo inogona kureva pfungwa yekusununguka nokuti inosanganiswa ne shiri. Shiri dzinofungidzirwa semhuka dzisununguko uye ndicho chikonzero ivo vanogona kubhururuka kubva kune rumwe rutivi rwepasi kune rumwe. Mhemberero imwe chete kana iyo yakawanda inogona kutaura pamusoro pekutsvaga rusununguko.
Zvose izvi nezvimwe zviratidzo zvinogona kushandiswa mukumiririra zvinhu zvakawanda kunyange zvazvo zviduku pane chero chikamu chemuviri.
Dzvanya pano kuti utarise zvinyorwa zviduku zvidhori zvemazano zvevarume nevakadzi.
Angel tattoo chinoreva
Angel tattoo haisi kushamisika nekuda kwezvinoshamisa zvinoreva izvo zvinouya. Iwe unofanira kunge wakaona ingiro yakawa ine zvarinoreva. Hazvina mhosva kuti ngirozi inoswededzwa sei pamusoro pako, ichiri kukupa chinangwa chaicho. Ngirozi inonzi tattoo haimiri zvinhu zvisina kunaka. Vanotaura nezvekumira pamusoro pematambudziko kana kutamira mberi kwechinetso muupenyu. Izvi ndezvimwe zvezvinoreva zvinouya nengirozi tattoo.
Vanogona kuva nechokuita nekunamata, tariro, chiKristu, kudzivirirwa, kuchengeteka, kutenda, muchengeti, simba, rusununguko, mweya wakasununguka, kusava nemhosva, kunyarara, kuzvikudza, hukama, chinhu chipi nechipi chakanaka, ushingi, ushingi, kuvimbika, rudo, rusununguko , chiremerera nekuchena
Izvo zvinoreva ngirozi zvinogonawo kuchinja nenzira iyo munhu anopfeka ari kushandisa iko. Unhu hwakanaka uye unyoro hunogona kusimidzwa nengirozi yevakadzi apo varume vacho vanogona kugadzirisa ngirozi nenzira iyo yavanoda. Nemapapiro, ngirozi dzinomirira pane chimwe chinhu chakasiyana. Ngirozi inogona kuiswa kune chero chiratidzo chipi zvacho kuti iite kuti ive nechinangwa chaicho. Paunenge uchienda kune ngirozi yako tattoo, zvakakosha kuti iwe une pfungwa yakanaka yekushandura ngirozi yako kune zvaunoda kuti iireve.
Dzvanya pano kuti utarise bhuku rekupedzisira mifananidzo yekutora pfungwa yevarume nevakadzi.
Anchor tattoo inomiririra simba uye kugadzikana. Wati waona tattoo yekare here? Iyi tattoo yakatanga makore akawanda akapfuura neVaSumerian. Iko tattoo yakave imwe yezvinyorwa zvekare zvekare uye yakashandiswawo nevaKristu vepakutanga. Izvi zvakaitika pavakatambudzwa nekuda kwezvavanotenda. Inosanganisira kushandiswa kwemvura mune rimwe sangano regungwa rakafanana neswindo, simba, kuchengeteka uye kuchengeteka,
Dzvanya pano kuti utarise maitiro ekupedzisira anchor tattoo design kwavarume nevakadzi.
Miseve inozivikanwa sechiratidzo cheNative America uye yava imwe yezvinhu zvinotaura nezve tattoo. Kana museve ukayambuka, inotaura pamusoro pehukama uye kana inogona kuonekwa semasimba kana iri muhomwe. Apo museve unopinda nepadhaimani, inozivikanwa sehushingi apo museve wega unozivikanwa sekudzivirirwa nekudzivirira.
Kana inoswededzwa kuburikidza nechiratidzo chemadhamoni, inogona kuratidza ushingi sezvo mumwe achifambira mberi. "Vanotiwo, Mushonga wega woga unomiririra kudzivirirwa uye kudzivirirwa pane zvinokuvadza. Inogonawo kushandiswa sechiratidzo chekufamba kana kutungamira. Miseve inogona kuva yakanyanyisa uye inokwanisa kugadziriswa maererano ne "wears" tsanangudzo. Muvara, mararamiro uye nzira iyo inotorwa nayo ndiyo inoita kuti tattoo yemuseve ive imwe yezvakanakisisa pamuviri wemunhu. Nechirevo chemuti, murume kana mukadzi anogona kutora michina yakaisvonaka kuti aone chic. Nhomwe yemiseve minomwe inomiririra simba, asi museve mumwe unogona kuputsika nyore nyore. Bhomba remiseve rakaoma kuputsa. Miseve inozivikanwa kuti inopa simba kuna avo vari kutsvaga nzira dzekutarisira kutya kwavo uye kumira kunze kwevanhu.
Dzvanya pano kuti uone chinyorwa chemazuva ano tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Butterfly tattoo chinoreva
Butterfly inotaura nezvekunamata uye rudo. Inogona kuratidzira pfungwa uye kunyange rudo, chido uye rudo. Huruveki yakanaka kwazvo uye yakajeka iyo ndiyo chikonzero vazhinji vakadzi vanogara vachitsvaka kuinzwa mumitumbi yavo. Kunaka uye kudada kunowedzera kana iyo inenge yakazonaka. Iyo ibasa romunhu anogadzirisa kuti asarudze kuti chii chaizotorwa.
Iveflyfly tattoo inofadza uye inoshamisa. Hurifly inozivikanwa kuti inoshanduka humwe husati hwaita kuti huve hwakanaka. Somugumisiro, zvakawanda zvinoreva zvinosanganiswa nehoveflies sekumuka nekuberekwa patsva. VaKristu vanotora girofu sezvo Jesu Kristu akamutswa kuvakafa uye kukwira kwake kumatenga.
Butterfly tattoo zvakare inoreva Rudo, Kumuka uye Kuberekwa, Kunamata uye Mweya, Kuchinja, Kwemweya uye Mweya, Nyasha nevakadzi. Iko kune maitiro mashomanana chete anoita kuti iwe ude kumira uye unoda zvaanoreva. Chimwe chezvinyorwa zvakadaro ndiyo butterfly tattoo inouya mukusiyana uye maitiro. Uyezve, Celtic Butterfly Tattoos inofananidzira zveMweya uye zvepaganism. Ikoko kune kenza yemazamu butterfly tattoo inotaura pamusoro uye inomiririra Hope nekuberekwa kune avo vakapona.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa ekuratidzira mazano ekugadzirwa kwevarume nevakadzi.
Cherry maruva tattoos zvinoreva
Cherry maruva tattoos anogona kureva fragility yehupenyu uye zvakare kutaura pamusoro pekunaka. Vakadzi vanochida nokuti inotaura zvakawanda pamusoro pavo. Iko kukurudzirwa kune vakadzi vari kutsvaga nzira dzekutaura nyaya dzavo kunyika. Paunosarudza chitubu chine maruva, iwe uri kutaura nezvekurasikirwa rudo kune vamwe avo vanofanira kunge vakafirwa. Iyo inouya nenzira dzakasiyana-siyana uye maumbirwo uye kunyanya maererano netsika kubva kwairi yakatorwa. Vanhu vakawanda vanoda tattoo vanogona kuishandisa kushandisa zvinoratidza zvinhu zvakawanda.
Mazuva ano, kunyange varume vari kuvhara katoriyumu inoratidzira tattoo kuti varatidze kuti vanokwanisa sei kana pane zvekuda avo vanobatsirana navo. Uyewo kufanana nevashamwari vavo sezvo inotaura pamusoro peLuck, Rudo, Kusimba, Kuchena, Runako, Fragility, Simba, Nobility, Kuvandudzwa, Kuchinja uye Kubudirira. Duva racho rakafananawo nekuvandudzwa kunoonekwa panguva yechando. Sezvakabatanidzwa nechechi, maruva e cherry anomiririra kukohwa kwakanaka, kudzivirirwa kwezvirimwa uye kudzoka kwakanaka kwehupenyu mushure mekurumidza kunaya. Chiratidzo ndicho chimwe chinhu chinoita kuti tattoo imwe yevaduku vevanhu kunyanya vakadzi.
Dzvanya pano kuti uone chinyorwa chekupedzisira cherry blossom tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Chimwe chezvikonzero zvinoita kuti vanhu vaende kambasi tattoo ndeyekuti zvinomirira chii. Compass tattoo ine zvinoreva zvakasiyana asi kune avo vari mumvura, inokosha chaizvo. Zvinoreva chiratidzo chekanaka, kuchengetedzwa uye kutsigirwa. Chiratidzo chinouya nenzira dzakasiyana-siyana uye mitambo. Kune marudzi ezviratidzo izvi ane tsanangudzo dzakawanda kune anorema. Kutevera nhoro dzako ndechimwe chezvinoreva iwe tattoo. Iwe haufaniri kutamira kure kuti uite mamiriro ako muupenyu hunozivikanwa kune vamwe. Neichi chinyorwa, zviri nyore kwauri kuti uudze nyika yako nyaya yako pasina kuita inzwi.
Kucheka pane chero chikamu chemuviri wechiratidzo chinokuudza chikonzero nei iwe wakanyora tattoo pakutanga. Inomirira kutungamirirwa uye kutungamirirwa, uyewo chiratidzo chekanaka. Ichi ndicho chikonzero nei mifananidzo yakawanda yekambasi inogona kuonekwa yakaiswa pazvikepe. Kuzivikanwa kwechitema ndicho chimwe chinhu chaunogona kuonga paunenge uchiona chero chipi zvacho. Mazuva ano, haasisiri varume vari kushandisa iko asiwo vakadzi vanoda kutarisa fashoni.
Dzvanya pano kuti uone kambani kambasi ikambasi yemapikicha pfungwa yevarume nevakadzi.
Dragon Tattoo Zvinoreva
Chii chinoreva chirevo ichi? Vakawanda vevanhu vane zvakasiyana zvakasiyana nedhiragoni tattoo. Zvisinei, chinyorwa chinonzi tattoo design chinogona kureva mashoko akanaka, ruzivo, kuchengetedzwa nekubudirira. Icho chiripo zvimwe zvinoreva semashiripiti, njere, murwi, makaro, simba, kubereka, unhu, uchenjeri, simba, kufara, kunamata, mufaro uye zvimwe zvinoreva zvakawanda.
Iko kune maitiro mashomanana chete anoita kuti iwe ude kumira uye unoda zvaanoreva. Chimwe chezvifananidzi zvakadai shato inonzi tattoo inouya mukusiyana uye mitambo. Zvinoreva dhiragoni zvinouya mumamiriro akasiyana-siyana painenge iri muviri. Vamwe vanhu vanowedzerawo mavara kune dhiragoni dzavo dzakaita kuti zvionekwe zvakasarudzwa uye zvakagadzirirwa kutora kwavo. Ichi chinyorwa chinogona kuiswa pane chero chikamu chemuviri uye chicharamba chichiudza nhau kuti zvinorehwa kuita. Zvinorehwa uye zvinoreva chirevo ndicho chinokwevera vanhu vazhinji vanoda maitiro makuru mazviri.
Icho chiratidzo chesimba neuchenjeri. Vamwe vanhu vanozvitora semakaro uye zvakaipa. Dhiragoni inofungidzirwa neChinese seuchenjeri, nhanho yakanaka, nekufarirwa. Kune avo vanobva kuJapan, vanofunga kuti dhiragoni yakaenzana. Iko Celtic nyoka iyo inowanzokweverwa korona uye zvigaro zvoumambo zvinomiririra simba nesimba.
Dzvanya pano kuti uone shanje rekushongedzwa kwechirongwa chevarume nevakadzi.
Zvinoreva nharo yehofu ine zvinoreva zvakasiyana kune vanhu vakasiyana. Njovu inogona kureva rugare, simba uye simba. Izvi zvinomiririra kune avo vari kutsvaga kutaurirana, uchenjeri, ruzivo uye kubudirira. Vamwe vanhu vanozviona sekubereka vamwe apo vamwe vanozvitora sokuzvipira, kufunga, kushivirira nekuchena.
Nzoufu dzinoonekwawo pamwe nemakore uye kubudirira, hukuru, mufaro, chirangaridzo, kutsunga uye kusingaoneki. Elephant tattoos anouya akasiyana-siyana uye hukuru. Zvisinei, ibasa romunhu anoremara kuti asarudze kuti chii chichaiswa. Munhu wose anoda chirevo ichi ane zvaanoda kune zvinorehwa uye anokwanisa kukuudza iwe pavari kushandisa zvidhori panzvimbo yavari kunywa. Nyofu inomiririra Prosperity, Memory, ?? Mufaro, ?? Nobility, ?? Kutsunga, Kusabvumirwa uye Tsitsi.
Simba, Simba, kubudirira, Mhuri, Gungano, Madzimai, Mhanza Yakanaka, Uchenjeri, Kukurukurirana uye Rugare zvimwe zvekufananidzira kwenzou. Nyefu ndeimwe yezvisikwa zvakanakisisa zvaunogona kuisa mukati wako uye kunzwa uine mufaro unofadza hunoita kuti ude kuratidza tattoo chero kupi zvako kwaunenge uri. Kuiswa kunogona kuitwa chero chikamu chemuviri. Uyewo, kune nzira dzakasiyana-siyana iyo iyo nzou inogona kutorwa pamuviri.
Dzvanya pano kuti utarise hurumende dzemazuva ano zvirongwa zvevarume nevakadzi.
Koi hove inogona kuva yakasiyana-siyana mumasikisi uye ruvara uye zvinoreva. Vamwe vanhu vakaipfeka vanoti zvinokonzerwa nekutarisana kwavari kusangana nazvo ivo vari kushandisa iko, asi vamwe vanoishandisa kuti vavatsigire kuti zvinhu zvose zvichave zvakanaka. Inogona kureva ushamwari, rudo ruchiva, rusununguko, simba, nhanho, upenyu hurefu, kubudirira, masculinity uye kufambira mberi.
Mifananidzo iyo tattoo inouya nayo inogadzirisa zvinhu zvakawanda zvakare. Iyo inomiririra rombo rakanaka, rudo uye nerombo. Iwe unogona kusarudza mararamiro uye chimiro che tattoo. Kuita zvinhu zvakakosha zvakakosha kuti ndicho chikonzero chatinoona maitiro akasiyana-siyana ehove dzehoi pamativi akasiyana emuviri. Kubata kwechiratidzo kunoshamisa. Maruva eLotus anowanzoratidzwa mumatoto. Bhatius yebhuruu inomiririra kutarisa kwemweya pane zvepanyama. Inomiririra uchenjeri, njere uye ruzivo. Ikoji yepepuru inomiririra maonero ezvakaitwa nechitendero. Ikoji inonzi pink inotaura nezveBuddha apo iyo tsvuku tsvuku inotaura nezvemoyo, tsitsi uye chido chinosanganisira rudo.
Koi hovewo inomiririra kubudirira uye nzira yemazuva ano yekuramba ichitarisa mukati mezvinetso nematambudziko kune avo vanoda rubatsiro.
Dzvanya pano kuti uone chekuita mapepa ekuti koi fish tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Shumba Tattoo zvinoreva
Izvo shumba yembongoro inogara ichityisa mukutarisa kwayo uye inotaura pamusoro pekuzvikudza, ushingi, madzimambo nesimba. Kune zvinoreva zvakasiyana maererano netsika. Shumba inogonawo kureva utsvene, Simba, Ushingi, Ushingi, Kuvimbika, Nobility, Kudzivirirwa, Kuvimbika, Simba, Kuvimbika uye Simba. Zvinorehwa neshumba inonyanya kukosha ndicho chikonzero chikonzero nei vanhu vazhinji vachigara vachitsvaka kuziva kukosha kwezvavari kunywa. Unyanzvi hwakanaka uye hunogona kuvhara chero upi hwemuviri kunyange zvikamu zviduku zvikuru seminwe.
Maonero ekutaura pamusoro peshumba ndeye inoita kuti ave imwe yemhando dzakanakisisa dzive ineded. Shumba mbiri dzinoratidzwa kumashure dzinotiudza pamusoro pekubuda kwezuva nekuvira kwezuva kana kunyange East inouya kuzosangana neWest. Shumba inogona kutaura pamusoro pekutungamira uye inogona kuonekwa kune dzimwe nzvimbo tsvene kana dzinoremekedzwa pasi rose.
Mifananidzo iyo tattoo inouya nayo inogadzirisa zvinhu zvakawanda zvakare. Iwe unogona kusarudza mararamiro uye chimiro che tattoo. Kuita zvinhu zvakakosha kunonyanya kukosha ndicho chikonzero chatinoona maitiro akasiyana-siyana ehumbwa pamativi akasiyana emuviri. Kubata kwechiratidzo kunoshamisa.
Dzvanya pano kuti utarise bhenekeri simba rekushongedza pfungwa yevarume nevakadzi.
Lotus tattoo zvinoreva
Lotus tattoos inogona kuva yakaoma uye zvinyorwa zvadzo zvine mazano zvakagadzirwa zvakaita kuti zvinoshamisa zvinoshamisa. Mavara ezvinyorwa ndeapi anopa tatus tattoo zvakasiyana. White lotus inotaura nezvepfungwa nekunamata. Inotaura pamusoro pechena uye kuchena zvakare.
Bhatius yebhuruu inomiririra kutonga kwemweya pane zvepanyama. Inomiririra uchenjeri, njere uye ruzivo. Ikoji yepepuru inomiririra maonero ezvakaitwa nechitendero. Ikoji inonzi pink inotaura nezveBuddha apo iyo tsvuku tsvuku inotaura nezvemoyo, tsitsi uye chido chinosanganisira rudo.
Kune marudzi akasiyana-siyana ematoto ayo unogona kushandisa mukuchinja maonero aunoita. Tora somuenzaniso, mapapiro anouya nenzira dzakasiyana-siyana uye hukuru. Iko hakuna chikamu chemuviri chisingakodzeri mukati. Chii chinoreva feather tattoo? Vanhu vazhinji vane zvinoreva zvakasiyana. Lotus tattoo inofananidzira ndicho chikonzero chikonzero vanhu vanoenda kwavari nyore nyore kunyanya avo vanonamata vanoona zvakawanda zvinorehwa nemutambo uyu wakanaka. Inogona kukweverwa nehoi hove kuitira kuti ive neimwe inoshamisa inoreva rudo, kubudirira, ruzivo rwakanaka, kukwanisa kugadzirisa zvipingamupinyi uyewo njodzi.
Dzvanya pano kuti utarise bhuku rejaya rekutsvaga mazita evarume nevakadzi.
Feather tattoo inogona kureva pfungwa yekusununguka nokuti inosanganiswa ne shiri. Shiri dzinofungidzirwa semhuka dzisununguko uye ndicho chikonzero ivo vanogona kubhururuka kubva kune rumwe rutivi rwepasi kune rumwe. Mhemberero imwe chete kana iyo yakawanda inogona kutaura pamusoro pekutsvaga rusununguko. Uyewo, mapeather akafanana anotaura pamusoro pechinhu chekufambisa, pfungwa, kukwanisa kuwirirana nekuchenjera. Mhemberero dzinogona kureva avo vakapfuura, kubatana nevakafa.
Feather tattoos mamwe emhando dzakanakisisa dzekuti iwe unogona kuona zvakapoteredza. Iko isiri uye inokosha. Haasi munhu wese waunoona aya mavara. Paunenge uchitsvaga chimiro chekunyora kuti utsvake rusununguko rwako, iyi tattoo inongova imwe chete yokuenda nokuda kwekunaka uye kukosha. Zvinomirirawo zvipo zvinowira kubva kudenga. Nhepfenyuro dzinorevawo Rusununguko, Chokwadi, Chiedza, Kachimbidzika, Kukwira, Kurwisana, Mhepo Yakakwirira, Nharo, Kururama, Ushingi, Vimbiso, Ushingi, Tariro, Kutaurirana kune rimwe divi, Rwendo rwemweya, Kutamba, Muchenjeri, Kurapa uye Kuora. Ma Tattoos akanyatsogadzirirwa kukupa iyo chizivo chaunoda. Kune marudzi akasiyana-siyana ematoto ayo unogona kushandisa mukuchinja maonero aunoita.
Dzvanya pano kuti utarise mazuva ano feather tattoos design pfungwa yevarume nevakadzi.
Owl tattoo ndeyevaya vanoda ruzivo rwemafu kana kunyange mumvuri walkers. Owl tattoo inoshandiswa kumirira usiku vanotumira uye nzvimbo yezvinhu izvo zvisingazikamwi.
Owl inomiririra tariro mune nguva dzinotyisa kana dzisinganzwisisiki. Mhedziso ine simba yehovha usiku nokuti chiratidzo chayo chinoshamisa chinochifadza kuvanhu. Inogona kureva uchapupu hwokuti pane chiedza pamagumo emugwagwa. Zvinoreva chirevo zvinogona kuva simba, magii, kurota, kujekesa, kutungamira, intuition, uchenjeri, kuziva nokudzivirirwa.
Icho chinorevawo kugadzirisa magetsi, simba uye zviratidzo zviri nani. Chikora chinogona kukweverwa nenzira dzakawanda uye dzinopedzisira zvine zvinorehwa zvaunoda. Mhombwa yechechi inogona kuva chiyeuchidzo cheumwe munhu anofa uye zvakare kuti isu tose tinofanira kurarama hupenyu huno huzere.
Zvigadzirwa zvehovha zvinewo zvarinoreva saiyo yakakurumbira shuga tatl tattoo inowanzonzi Mexican owl tattoo kana candy owl tattoo. Tora muenzaniso veMexico vanoda zuva revakafa tattoo nekuda kwebasa rainoisa. Pane nzira dzakasiyana-siyana idzo munhu anogona kuisa izvi pamuviri kuti aite mutsauko. Pakupera kwezuva, ndiye anoremara, anokwanisa kutaura zviri nyore pamusoro pekuti tattoo inorevei.
Dzvanya pano kuti uone yakapedzisira kuitika maziso emufananidzo wevarume nevakadzi.
Rose Tattoo zvinoreva
Rose anoratidza rudo. Vaya vari murudo vanogona kutarisa nyore nyore nekodhi ye tattoo. Kana rima risati riri nemhinzwa, rinoreva kuti hapana chibayiro chinofanira kuitwa kana uchida uye ipapo, kana pane mhinzwa, zvinoreva kuti pane chibayiro chinofanira kuitwa. Runako risingaperi ndiro rose rinogona kureva kune vamwe vanhu. Vamwe vafambisi vengarava vanosarudza iyi tattoo nekuda kwezvinangwa zvayo. Iyo inobatanidzwawo kune vakadzi, iyo inowanzoreva vakadzi chaivo vakasara shure panguva dzekufamba. Kunyange vamwe vamwarikadzi vanozivikanwa nemutambo uyu. Rosi inogonawo kushandiswa kutaura pamusoro pekuenzanisa. Kwakave mazuva apo roses ndeyevakadzi chete.
Nhasi, kunyange varume vari kunyora iyi tattoo kuti varatidze kuti vanogona sei kana vachida kuda vavakidzani vavo. Rinoreva Rudo, Kumuka uye Kuberekwa, Kunamata uye Mweya, Kuchinja, Kunamata uye Mweya, Nyasha nevakadzi. Kunaka uye kudada kunowedzera kana iyo inenge yakazonaka. Iyo ibasa romunhu anogadzirisa kuti asarudze kuti chii chaizotorwa. . Unyanzvi hwakanaka uye hunogona kuvhara chero upi hwemuviri kunyange zvikamu zviduku zvikuru seminwe. Iko kunorema kwechinyorwa chechiratidzo kunobva nenzira iyo munhu akaiisa iyo inofunga nezvayo.
Dzvanya pano kuti uone maitiro emangwana rose maitiro ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
Tribal tattoo zvinoreva
Chirwere chetatu chinomirira simba kana ushingi kukurira zvipingamupinyi. Zvinorehwa nemadzinza zvinouya kubva mumagariro kana nzvimbo kana kunyange nzvimbo. Yakatanga mumazuva ekare apo vamwe vanhu vanowana tsanangudzo yavo kuburikidza nematoto. Rudzi rwetatu rinoshandiswa kutaura pamusoro pekunamata kana zvechitendero. Inoshandiswa sekugadzirisa kana kunyange kudzivirirwa. Inoshandiswa zvakare kutaura nhau dzisina munhu anogona kukwanisa kutaura kunze kwerudzi kubva kwerudzi urwu rwakabva. Iwe haufaniri kutamira kure kuti uite mamiriro ako muupenyu hunozivikanwa kune vamwe. Neichi chinyorwa, zviri nyore kwauri kuti uudze nyika yako nyaya yako pasina kuita inzwi.
Mutsara wemadzinza ane zvinyorwa zvakawanda uye zvinogona kureva kuora. Denderedzwa pamutambo inotaura nezvekukwanisa uye kuenzanisa uye nekusingaperi, apo iwe wakatarisa kumativi ose kubva kubva pakati kusvikira kumativi ose. Zvitendero zvizhinji zviri kushandisa iko kutaura zvinhu zvakawanda kune avo vakatendeka. Chiratidzo chinomiririra chiremerera, kukudza, mutsa, kuvimbika, kutendeseka uye moyo. Chiratidzo chinoshandiswawo kutaura pamusoro pekushushikana, simba uye kugadzirisa. Inogona kuratidzwa muzvinhu zvisingawaniki uye zvakasiyana nedzimwe nyuchi, hoi koi uye octopus kumirira kuchengetedzwa, rubatsiro uye ushingi.
Dzvanya pano kuti uone maitiro emadzinza ekupedzisira mazano emurume nevakadzi.
Wolf tattoo inogona kushandiswa kutaura pamusoro pevanhu vanotsvaka rusununguko. Chiratidzo chinorevawo rudo rwekuda nekuremekedza, simba uye kuvimbika. Wolf inogonawo kureva masango, mhuri, simba, masimba, kudzivirirwa, rusununguko, kupona uye zvimwe zvakawanda. . MukuSiberia, hombe inonzi inodzivirirwa kusachena kwevana - uye inonyanya kukokwa kuti ichengetedze kubereka kwakanaka. Munguva yekare Eurasia, mhumhi yaiva mudziviriri wezvakavanzika. Sezviri pachena kana iwe ukaudza mbwa yako chakavanzika, iwe wakabvisa mutoro wekutakura iyo apo mhumhi inodzivirira zivo nokusingaperi.
Vanhu vanoenda kumharuro wembiru havasi kutongwa nechishuwo nekuda kwekuti vanotenda mumasikirwo. Vavengi vanoita iyi tattoo kuti varatidze kuti vane simba sei. Mhumhi inotendwa sevadziviriri veavo vakafa. Ichi ndicho chikonzero ivo vanowanzoonekwa pamakuva kana pamakuva.
Wolf tattoo inogona kuonekwa munzvimbo dzakasiyana dzenyika uye dzinomiririra zvinhu zvakawanda zvakare. Kusiyana kwezvivara izvi ndiko kunoita kuti zvive zvinoshamisa. Zvinomirira
Simba Rine Simba, Simba, Kubwinya, Kodzero Nekodzero, Dambudziko nekuparadza, Simba, Kudzivirirwa uye Kuvimbika, Kushushikana uye Kuita Zvepabonde. Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vazhinji vari kushandisa iko.
Dzvanya pano kuti utarise mapepa emangwana mapiritsi ekugadzira pfungwa yevarume nevakadzi.
flower tattoosback tattoostattoos kuvanhucompass tattooFeather Tattoorip tattoostattoos for girlstattoo yezisoshamwari yakanakisisa tattoosfoot tattoosrose tattooscat tattooszuva tattoosoctopus tattootattoo ideastribal tattoosHeart Tattooschifuva tattoosarrow tattoosleeve tattoosbutterfly tattooscherry blossom tattoomehndi designkorona tattooszodiac zviratidzo zviratidzocross tattoosrudo tattoosarm tattoosmwedzi tattooscouple tattoosmimhanzi tattooshanzvadzi tattoosAnkle TattoosAnchor tattoosangel tattooskoi fish tattoohenna tattooelephant tattoobirds tattoosneck tattoosGeometric Tattooslotus flower tattooshumba tattoomaoko tattoosinfinity tattoocute tattoosdiamond tattooscorpion tattooeagle tattooswatercolor tattoo